ဘ၀ က ကဗျာတပုဒ် မျှ
ဘ၀က လမ်းကလေး တခု
ငါ ချစ်တဲ့သူ နဲ့ သာ အမြဲ လျှောက်လိုခဲ့တာပါ
ချိုးငှက်ငယ် တကောင်သာ တွေ့ခဲ့ရတဲ့
ဟင်းလင်း ပြင် ကမ္ဘာ..
ဘယ်သူ့ ကို ပြန်စေချင်တာလဲတော့ မသိ
အင်္ဂလိပ်လိုရော မြန်မာလိုပါ ရေးနေတဲ့
ကဗျာဆရာ အတွက် ဘာသာပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်
ချစ်သောသူနဲ့သာ ဘ၀ကိုအတူရှေ့ဆက်လျှောက်လှမ်း နိုင်ပါစေလို့လဲ ထပ်ပြီးဆန္ဒပြုခဲ့ပါတယ်
ဘဝရဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ 
လက်တွေ့ မှာ ထင်တာနဲ့ 
ဆန့် ဆန့် ကြီးကျင်နေတဲ့ 
လေး မြင်သွားပါတယ် ......
ဘ၀ဆိုတာက လက်တွေ့ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းရတဲ့ အင်မတန် ကြမ်းတမ်းတဲ့ ခရီးဆိုတော့ ကဗျာလို နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ ဘ၀ကိုတော့ တောက်ရှောက် ဘယ်သူ့မှာမှ ရနိုင်လိမ့်မယ် မထင်ပါဘူး။ ရရှိတဲ့ ဘ၀လေးကိုပဲ ကဗျာလို လှပ နူးညံ့သိမ်မွေ့နိုင်အောင် ကြိုးစားခြင်းသာ အကောင်းဆုံးပဲလို့ ထင်တယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ငါမနှစ်သက်ချင်တဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုသာ ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ဘာဆိုဘာမှမရှိတဲ့ မြေကမ္ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်
ဒါက တတိယပိုဒ် ဖြစ်မယ်။
Life is just nothingness
That I can or will never understand,
But it won’t become meaningless
Whenever I recall the warmth ofatender hand.
Dove ကို..ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိ ဂျိုးငှက် တကောင် လို့ မရည်ညွှန်းဘူး ဆိုရင်တော့..
That I hardly ever meetasingle bird.
ဆိုရင်..ပို ကာရန် မိမယ်ထင်တယ်။
ဘာသာပြန်ဆု ပေးမလို့လားအကို.... ကျနော်ဖတ်ရတာတော ရက်ဖ်တူရှင်ဂို နဲ့ တောင် ရေးပုံချင်း တူနေသလိုလို... ကျနော်နားလည်တာတော့အကိုရေ ချိုတဲ့ ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုသောက်ပီး အရသာကိုဘာသာပြန်ခိုင်းရင် sweet လို့တော့ စားကားလုံးချင်း ဘာသာပြန်လို့ရကောင်းရဲ့ အရသာကိုဘာသာပြန်ဘို့တော့ ခက်မယ်နော် (ကျနော့်အတွက်ပြောတာပါ) ကဗျာကိုဖတ်ရတဲ့အရသာကလဲ အဲလိုပဲအကိုရေ ၊
Homa ဟာ Homa အတိုင်းပဲကောင်းပါတယ်အကိုရာ ၊အကိုရေးထားတာလေးပျက်ပါ့မယ် ဟား ဟား
ရေးဆိုလို့ ရေးသွားတယ် အကိုရေးးးး
ဘာသာအမျိုးမျိုး ပြန်ကြပေမဲ့ ဖတ်ရတာ ၀မ်းနည်းနေမိတာ။
ငါကိုယ်တိုင် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် မက်မက်မောမော ရွတ်ဆိုနေချင်ခဲ့မိတဲ့....။
ငါ မလိုလား မနှစ်မြို့ရတဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုသာ ဖြစ်နေခဲ့ပါကလား...။
ဘ၀ဆိုတာ ရိုးရှင်းတဲ့ လမ်းသွယ်ကလေးတစ်ခု..
ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့ တစ်ယောက်သော သူနဲ့ တွဲလက်တွေ ခိုင်မြဲလို့ အတူလျှောက်လှမ်းချင်ရုံပါပဲ..
ငြိမ်းချမ်းရေး နိမိတ်ပုံ ချိုးငှက်လေး တစ်ကောင်တောင် မြင်တွေ့ခွင့်မရနိုင်တဲ့ ကမ္ဘာလောကကြီး သက်သက်ပါလား...။
(အစ်ကိုရေ.. ကြိုးစားပမ်းစား ထင်သလို ပြန်ဆိုသွားပါတယ်..:)
အကိုကြီး ကျမတော့ ဘာသာလည်း မပြန်တတ်လို့
အကိုတင်မယ့် highly appreciated ထဲပါမှာမဟုတ်...
အပေါ်က ဘာသာပြန်လေးတွေဘဲ ရွတ်သွားပါတယ်...